magaalada Baydhabo:Xaalad Biyo yari aad u daran oo ka jirta halkaas….. – idalenews.com
magaalada Baydhabo:Xaalad Biyo yari aad u daran oo ka jirta halkaas…..
Xaaladda biyo Yarida ee Xiligan ka jirta magaalada Baydhabo ayaa mareysa halkii ugu sareysay,waxaa gabi ahaanba Guray ceelashii biyaha ee ay gaarka umaamulaayeen Shirkadaha biyaha qaabilsan ee magaalada.
boqolaal Gaari dameero ah oo ka shaqeeya Biyaha ayaa safaf dhaadheer usoo gala arooti Ceel Biyo oo ah meesha kaliya ah ee Magaalada biyo ay ka hesho taas oo si gaar ah ay umaamulayso Shirkada Biyaha ee Warjinaay
Fuustadii biyaha ayaa lagu kala iibsanaya 40-kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta Laba doolar taas oo aan awoodinn qoysaska danyerta ah iyo Kuwa Qaba Baahiyaha Gaarka ah, balsee Biyo yarida waxaa si wadajir ah ay usaameysay Bulshada oo idil .
Midkamidha Dadka Dadka kashaqeeya Kateetooyinka biyaha sheegay in xilligan magaalada Baydhabo iyo hareeraheeda laga dareemayo Biyo yari aad u daran,waxayna Arrintaan si weyn saameyn ugu yeelatay dadka danyarta ah.
Bohoshii Biyaha ee ay caanka ku ahayd Baydhab ee ISHA oo xilliyada Jilaalka iyo Roobka isku si Biyaha uga socon jireen ayaa hadda noqotay meel lagu guro qashinka magaalada,waxaana ay hooy u noqotay dameero iyo dad darbi Jiif ah.
Nadaafadarida goobta ka jirta ayaa waxaa saameyn weyn ku yeelan kartaa bulshada Magaalada sida uu qabo Dr. Mangiste oo kamid ah Dhakhaatiirta magaalada Baydhabo.
Badi dadka magaalada Baydhabo ayaa aaminsan in Biya yarida jirta ay sabab u tahay in dadka qaar si sharcidaro ah ku dhisteen gudaha Bohosha oo ay xiray ilihii Biyaha ka imaan jireen.
C/kariin Sheekh isxaaq oo mudo 30-sano ah ugu danbeysay ISHA Baydhabo yaraatiisana ku dabaalinjiray ayaa xiligan layaaban sida ay utaalo ISHA ee loo dayacey.
Maxaa kataqaanaa magaciisa & beesha uu ka soo jeedo ninka is Qarxiyay
Deg deg:Wasiir Amniga Mr. Isloow” Har iyo Habeen waxaan diyaar u nahay inaan Difaacno shacabka